June 19 Birthday Wish By Vice President – PVTV Myanmar
June 19 Birthday Wish By Vice President
2021-06-19 at 10:23 PM
Hein Chit says:
2021-06-19 at 10:27 PM
ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေ့နေကြတာဘဲ ဒေါ်စုက အခုနိုင်ငံ့မိခင်ဖြစ်နေပီ တစ်ခုခုတော့မှားနေပီလို့ထင်တယ်
2021-06-19 at 10:33 PM
Zune Hnin Pwint says:
2021-06-19 at 11:09 PM
May you be safe and healthy our Vice President ❤️ Revolution must prevail 🙏
Dkk Dnnj says:
2021-06-20 at 12:10 AM
Ko Lat kout says:
2021-06-20 at 12:12 AM
One day, the future of our country will be bright says:
2021-06-20 at 12:17 AM
Free Our Mother Suu and all of Our Leaders and Innocent Civilians in Myanmar.
Kyi Lynn says:
2021-06-20 at 4:19 AM
2021-06-20 at 7:36 AM
May Daw Su and other people be free soon and haveapeaceful future days with their beloved family and people.
2021-06-20 at 8:47 AM
ေလးစားပါတယ္ ျပည္သူအစိုးရ၏ ဒုသမတႀကီး
2021-06-20 at 8:48 AM
ေခြးသူေတာင္းစား မအလ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အျမန္ဆံုး က်ဆံုးရမည္
htinlin htinlin says:
2021-06-20 at 9:17 AM
မင္းတုိ႔ ဝရမ္းေျပးေတြ ဘယ္ေရာက္ေနျကတာလဲကြ ေတာ္ေတာ္ျပင္းလုိ႔ပါ
2021-06-20 at 12:27 PM
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္ 👍 👍 👍 👍 👍 👍
Boma Kyi says:
2021-06-20 at 12:38 PM
Long Life, May May Suu! Long Life, President U Win Myint! Long Life, Vice President Duwa LaShi La!
MMM 2H says:
2021-06-20 at 5:33 PM
Nilar Mobile says:
2021-06-20 at 6:13 PM
2021-06-21 at 9:40 AM
Myo Myosss says:
2021-06-21 at 2:13 PM
ပုဂ္ဂိုလ် ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမကွဲဘူးလား
NLD International Network က စီစဉ်သော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း…
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ယနေ့ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည…